Galmudug oo hubka ka mamnuucday Dhuusamareeb & Gaalkacyo xilli Musharixiin ku heystaan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Galmudug oo hubka ka mamnuucday Dhuusamareeb & Gaalkacyo xilli Musharixiin ku heystaan
Galmudug oo hubka ka mamnuucday Dhuusamareeb & Gaalkacyo xilli Musharixiin ku heystaan
Guddiga Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa soo saarey amaro culus oo ku socda hubka iyo gaadiidka dagaal ee lala tagayto magaalooyinka doorashooyinku ka dhacayaan sida Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
Go’aano kasoo baxay Gudiga amniga oo ka koobna 8 qodob ayaa laga soo saaray in aan hub lagu dhex heysan karin Magalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb, xilli musharixiinta Aqalka sare qaarkood ay hub farabadan heystaan, waxaana Go’aanada kamid ah.
1: In Gudiga amniga Galmudug uu mamnuucay dhamaan hubka & Gaadiidka dagal ee lagu dhex heysto Galmudug, gar ahan magalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
2: In Shacabka ku nool degaannada Galmudug lagu wargelinayo inay si dhow ula Shaqeyaan laamaha maniga lana soo wadaagaan xogta iyo falalka ka dhanka ah Amniga.
3: laga bilaabo Maanta oo taariikhdu tahay 4/8/2021 aan wax hub ah lagu dhex qaadan karin Magalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo hadii aan fasax looga heysan laamaha Amniga Galmudug.
4: in la mamnuucay askari Ama Ciidan hubeysan oo Magaalooyinka hubka ku dhex wadan kara marka laga reebo kuwa loo xilsaaray sugida amniga, gaar ahan Magaalooyinka.
5: In Ciidamada qalabka sida ay ka foojignaadaan inay xabad ku ridaan Gudaha Magalooyinka, iyada oo aan lagu gudaneyn wajibad Shaqo.
6: In laga mamnuucay garoomada Magaalooyinka Galmudug, gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo in laga soo dejiyo hub ama Gaadiid dagaal oo an fasax loo heysan.
7: In aysan jiri karin qof ku dhex heeysan kara Magaalooyinka Galmudug hub, Ciidan ama Agab dagaal qof aan fasax ka heysan Hay’adaha Amniga
8: In Hay’adaha Amniga ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta Awaamiirta kasoo baxday gudiga Amniga Galmudug.
Previous articleGo’aano laga soo saaray askarta Shacabka dhexdooda rasaasta ku rida
Next articleXilliga ay dhaceyso doorashada Guddoonka Gudiga doorashooyinka Gobolada Waqooyi oo la shaaciyay